मध्यसहरमा टुकुचा खोला नै गायब : नारायणहिटी भित्र खोला छ बाहिर हरायो | HimalDarpan
मध्यसहरमा टुकुचा खोला नै गायब : नारायणहिटी भित्र खोला छ बाहिर हरायो
काठमाडौंको बाँसबारी–चन्डोलबाट नारायणहिटी–कमलादी हुँदै बागमतीतर्फ बग्ने टुकुचा (इच्छुमती) खोलाको करिब पाँच सय मिटर खण्ड नक्साबाटै गायब भएको छ । काठमाडौं प्लाजादेखि जयनेपाल हलसम्मको करिब पाँच सय मिटर टुकुचा खोला नापीनक्साबाटै गायब भएको छ । खोला बग्ने ठाउँ ६० भन्दा धेरै कित्तामा विभाजन गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ । जग्गामा ६ तलेभन्दा अग्ला भवन बनेका छन् । सबै व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार टुकुचा खोलाको चौडाइ विभिन्न ठाउँमा दुईदेखि १० मिटरसम्म कायम छ । तिवारीका अनुसार काठमाडौं प्लाजादेखि जय नेपाल हलसम्म सरदर कम्तीमा चार मिटर चौडाइ छ । यसलाई आधार मान्दा झन्डै १० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । जय नेपाल हल क्षेत्रमा अहिले सरकारी दरमै प्रतिआना जग्गाको भाउ एक करोड पर्छ । यस आधारमा टुकुचाको एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ ।
१. बूढानीलकण्ठबाट लाजिम्पाट हुँदै आएको खोला उत्तरढोका र गैरीधाराको बीचबाट नारायणहिटीभित्र छिर्छ ।
२. नारायणहिटीभित्र पनि खोला साँघुरो छ, तर बगेको स्पष्ट देखिन्छ, जयनेपाल हलअगाडिको पर्खालसम्म खोला छ ।
३. जयनेपाल हलबाट दक्षिणतर्फ कमलादी मोडसम्म खोलाको नामोनिसान छैन, खोला भूमिगत बनाएर भव्य भवन बनेका छन् ।
‘साबिकको टुकुचा खोला बग्ने भाग बढीमा १० र कम्तीमा दुई मिटरसम्म चौडा रहेको देखिन्छ । दुई मिटर चौडाको दरले हिसाब गर्दा पनि पाँच सय मिटर लम्बाइको खोलामा झन्डै पाँच रोपनी जग्गा मिचिएको देखिन्छ । सरदरमा चार मिटर मान्ने हो भने मिचिएको जग्गा डबल हुन पुग्छ । प्रतिआना एक करोड रुपैयाँको दरले मात्रै हिसाब गर्दा पनि मिचिएको जग्गाको मूल्य निकै महँगो पर्न जान्छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. तिवारीले बताए ।
प्राधिकरणको दाबी– ०२१ को नापीमा टुकुचा थियो, ०३३ मा गायब पारियो, नापी कार्यालय भन्छ– ०३३ अघिको कुनै विवरण छैन
डिल्लीबजारस्थित नापी कार्यालय काठमाडौंको रेकर्डमा खोला गायब भएको ठाउँ ०३३ मा नापी भएको छ । त्यसवेला तयार पारिएको नक्सामा प्राधिकरणले भनेझैँ टुकुचा खोला गायब नै छ । प्राधिकरणका अनुसार त्यस क्षेत्रमा ०२१ सालमा पनि नापी भएको थियो । सो नापीमा काठमाडौं प्लाजा–जय नेपाल हल क्षेत्रमा टुकुटा थियो । ०२१ को नापी नक्सा नापी कार्यालयसँगै हुनुपर्ने प्राधिकरणको दाबी छ । तर, नापी कार्यालय ०३३ मा लिएको नापी नक्साबाहेक विवरण नभएको बताउँछ ।
‘हामीसँग ०३३ मा लिइएको नापी नक्सा मात्रै भएको पाइयो । त्यसअघि र पछि नापी गरिएको कुनै विवरण छैन । ०३३ को नक्सा हेर्दा जय नेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्मको भागमा टुकुचा खोला गायब भएको देखिन्छ,’ नापी कार्यालयका सूचना अधिकृत सुमन श्रेष्ठले भने ।
मिचिएको जग्गामा बैंकदेखि सपिङ सेन्टर
बुढानीलकण्ठ हुँदै बगेर आएको टुकुचा खोला नारायणहिटी दरबार परिसर पूर्व–दक्षिण मोहडास्थित बाँसको झाङसम्म सतहमा देखिन्छ । त्यसपछि तल आउँदा गायब भएको खोला एकैपटक काठमाडौं प्लाजा पछाडितर्फको सतहमा बगेको देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार बाँसको झाङदेखि प्लाजासम्म खोला बग्न इँटाको फराकिलो आर्क बनाइएको छ । खोला सोही आर्कभित्र निरन्तर बग्दै आएको छ । आर्कभन्दा माथिको भाग माटोले पुरेर भूमाफियाले निजी नाममा दर्ता गरेका छन् ।
डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयका अनुसार उक्त जग्गामा अहिले लक्ष्मी बैंकको प्रधान कार्यालय छ । जय नेपाल हलको पार्किङ क्षेत्र पनि मिचिएको सोही जग्गामा पर्छ । सिद्धार्थ बैंकको कार्यालय रहेको भवन पनि मिचिएको सोही जग्गामा बनेको छ । एसबिएल डेभलपर्सले मिचिएको सोही जग्गामा पक्की भवन बनाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको छ । ओमकारशमशेर जबरा, महेन्द्रराज वैद्य तथा गौरी श्रेष्ठले पनि मिचिएको सोही जग्गा वर्षांैदेखि निर्बाध रूपमा भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक ट्राभल एन्ड टुरिजमसम्बन्धी कार्यालय रहेको भवन, रेस्टुरेन्ट, कफी सपदेखि सवारीसाधन पार्किङ क्षेत्र मिचिएकै जग्गामा निर्माण गरिएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार टुकुचा अहिले पनि जय नेपाल हलको ठीक मुनिबाट, गल्फ ट्राभलको छेउ हुँदै लक्ष्मी बैंक, साख हाउस, सिद्धार्थ बैंक रहेको भवन लगायतस्थानबाट भूमिगत रूपमा बगेको छ ।
महानगरपालिकाले खोजी गर्‍यो गायब जग्गा
काठमाडौं महानगरपालिकाले खोलाको गायब जग्गा दोस्रोपटक खोज्न सुरु गरेको छ । यसअघि महानगरपालिकाले २४ जेठ ०६६ मा गायब जग्गा खोजी गरेको थियो । तर, त्यसको परिणाम भने प्राप्त हुन सकेन । गत २९ चैतमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै महानगरपालिकाले जग्गाको पुनः खोजी सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा भने महानगरपालिकाले कित्ता नं. ४२२८, ४२२७, १७१० र १७११ मध्येको मिचिएको जग्गा दाबी गर्दै खोजी सुरु गरेको छ । मालपोत कार्यालयका अनुसार कित्ता ४२२८ ओमकारशमशेर जबरा, कित्ता ४२२७ एसबिएल डेभलपर्स, कित्ता १७१० गौरी श्रेष्ठ र कित्ता १७११ महेश्वरराज वैद्यको नाममा छ । महानगरपालिकाको रेकर्डमा भने श्रेष्ठको नाममा रहेको कित्ता १७१० र वैद्यको नाममा रहेको कित्ता १७११ लक्ष्मी बैंकको नाममा रहेको देखिन्छ ।
टुकुचा खोला मिचिएको सूचना आएको छ, विवरण पठाउन वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ : ईश्वरमान डंगोल, प्रवक्ता महानगरपालिका
टुकुचा खोलाको जग्गा मिचिएको सूचना प्राप्त भएको छ । यसको विस्तृत विवरण पठाउन वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । यस्ता जग्गा मिचिएको यो नै पहिलो होइन । अन्य ठाउँमा पनि छन् । सबै वडालाई मिचिएको जग्गाको पूर्ण विवरण पठाउन भनेका छौँ । विवरण संकलन हुँदै छ । कतिपय आई पनि सकेका छन् । मिचिएका जग्गा फिर्ता सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव तयार हुँदै छ । यो प्रस्ताव कार्यपालिकामा पेस हुन्छ । निर्णयपछि कडाइका साथ मिचिएका जग्गा फिर्ता अभियान सञ्चालन हुन्छ । (नयाँ पत्रिकाबाट)
सङ्क्रमितको यात्रा वृत्तान्त अध्ययन गरिने